Alshabaab oo soo bandhigtay Muuqaalo iyo sawiro dagaalkii ka dhacay Ceel saliini | Somalisan.com
Home Afsomali Alshabaab oo soo bandhigtay Muuqaalo iyo sawiro dagaalkii ka dhacay Ceel...
Alshabaab oo soo bandhigtay Muuqaalo iyo sawiro dagaalkii ka dhacay Ceel saliini
Dagaalyahano katirsan Al Shabaab ayaa weerar xoogan labo maalin kahor waxa ay ku qaadeen xero ciidanka milatariga Soomaaliya kaga sugnaayeen deegaanka Ceel saliini ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Weerarkan waxaa ka dhashay khasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray labada ciidan ee dagaalamay, waxaana Al Shabaab weerarkaasi ku qabsadeen xerada ciidanka milatariga inkastoo markii dambe isaga baxeen.
Al Shabaab ayaa warbaahinteeda kusoo bandhigtay sawirro ay kasoo qaadeen qaabka uu weerarka u dhacay iyo xerada ciidanka ay la wareegeen, waxa ayna Al Shabaab sidoo kale soo bandhigeen meydadka askar katirsan ciidanka milatariga ay ku dileen weerarka.
Sawiradda Al Shabaab soo bandhigeen ayaa sidoo kale laga dhax arkayay labo askari oo katirsan ciidanka milatariga oo Al Shabaab nolol ku qabteen, Al Shababa ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka ku furteen gaadiid dagaal iyo hub kala duwan.
Previous articleFull VIDEO farmaajo oo Saxiixay Sharciga Doorashooyika iyo kal fadhiga Baarlamaanka la xiiray
Next articleDalka Ugaandha oo ay ka bilaabatay Cunista iyo ka ganacsiga Ayaxa
VIDEO Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay hogaamiyaasha dowlad gobolleedyada
somalisannews - February 11, 2017
Banka Caalamiga ah ee Dahabshiil oo mar kale Muqdisho keentay Gaadiid cusub (Daawo...